Baqattoota Yaman: 'Namni akka itti bahu beeka malee akka itti deebiyu hin beeku' - BBC News Afaan Oromoo
Baqattoonni Itoophiyaa Yaman keessa jiran hangi tokko Jaarmiyaa Gargaarsa Baqattootaa IOMtiin deeggarsa taasifamuufiin biyyatti deebiyaa jiranis, kanneen hafan hedduun jireenya hamaa keessa jiraachuu iyyataa jiru.
Simiret Mahaarii imalli gara Sawud Arabiyaatti taasiftu hin milkaa'iin hafee ji'oota shanan darban biyya waraan goolamtuufi haalli jireenyaa hedduu itti hammaatte Yaman keessa jirti. Warra carraan gara biyya isaaniitti deebiyuun isaan hin qaqqabne hedduu keessaa tokkodha.
"Waanti tokko nuuf hin godhamne. Ani miillikoo citeera. Osoon gara Sawudii seenuuf jedhaa jiruu miillakoo na rukkutanii narraa cite. Warri biyyatti nu deebisuuf jedhan yeroo darbe nu galmeessaniiru garuu amallee teenyee eegaa jirra. Isa miillikoo cites wallaansa gahaa hin arganne," jetti.
Abdii Xaayiris jireenya hadhaawaa biyya Yaman keessa taa'anii Rabbi qofa eeggachaa jirra jedha. Biyya deeman ga'uu hin dandeenye, biyyaa keessa jiran Yamanillee yeroo kanatti baayyee rakkisaadha. Gara biyyatti deebiyuuf ammoo fedhii qabaatanis waan ittiin deebiyan akka hin qabne dubbata.
"Namni akka itti bahu beeka malee akka itti deebiyu hin beeku. Amma gara biyya itti deemuuf turre osoo hin taane, garuma biyya keenyaatti deebiyuufillee carraa ittiin deebinu akkamiin arganna jennee eeggachaa jirra," jedha.
Akka baqqattoonni lammiilee Itoophiyaa Yaman jiran BBC'tti himanitti baqattoonni ji'a muraasaa jalqabee hanga waggaa digdamaatti biyya waraanaan diigamte kana keessa jiru.
Rakkoon Yaman keessa jiru gidiraa baqattoota biyyattii keessa jiran daran akka hammeesse BBC'tti kan himan baqattoonni kun qaamni kamiyyu akka isaaniif birmachuu taasisuuf iyyachaa jiru.
Mohaammed Ibraahim baqattoota Yaman 103 gargaarsa IOMiin taasifameefiin warra biyyatti galaa turan keessaati.
Buufata Xiyyaaraa Sana'aa irraa gara biyyaatti deebiyuudhaaf bakka dabare qabatee jirurraa yeroo dubbatu, namoonni qaama hir'ataniifi darara mana hidhaa keessa turan warra galaa jiran kana keessatti argamu jedha.
"Namoonni osooma karaa deemanii rasaasaan dha'amanii harka, miila hin qabne ykn qaamaa hir'atanitu amma gara biyyaatti galaa jiru."
Ofii isaallee rasaaasaan rukkutamee miilli isaa mirgaan kan irraa cite Mohaammed, " Namoota hedduu na biraa rasaasaan rukkutamanii utuman ilaaluu lubbuun keessaa baate nan yaadadha," jedha.
Qondaala Komunikeeshinii IOM kan ta'an Obbo Alamaayyoo Seyifesillaasee baqattoota Itoophiyaa 418 Yemen keessaa biyyatti deebisaa akka jiran beeksisanii sababii baqattota kana osoo rakkoo jabduu hin saaxilamiin hin deebisiin turanis dubbataniiru.
Akka Jaarmiyaa kanatti, haalli qilleensaafi nageenyi biyya sanaa rakkisaa ta'uudhaan irra harkifachuu danda'eera jedha. Akka aanga'aan kun jedhanitti kan biyyatti deebisuun danda'amu warra seera qabeessa ta'aniifi deebiyuudhaaf fedhii qabanidha.
Sagantaan biyyatti deebisuu kunis si'a takkaatti waan hin danda'amneef buufata dhaabbatichaa keessa turanii dabareedhaan akka deebiyan taasifamu jedhan.
Biyyoota imbaasiin Itoophiyaa keessa hin jirre baqattootaaf rakkisoo ta'an akka Yamaniifi Liibiyaa keessatti baqattoonni buufata IOM biyyoota akkasii kana keessa jiran deemanii waraqaa eenyummaa/paaspoortii isaanii agarsiisanii gargaarsa barbaachisu argachuu yaaluu akka danda'an Obbo Alamayyoon himaniiru.